Nhau - (Tarisa pane FOEN) Kuchengetedzeka kwemasuo uye Windows pasi peiyo 18 dhaka rakaona kuchengetedzwa kweFOEN yakachengeteka system yemasuo nemahwindo.
(Tarisa pane FOEN) Kuchengetedzeka kwemasuo uye Windows pasi peiyo 18 dutu kupupurira kuchengeteka kweFOEN yakachengeteka system yemasuo nemahwindo.
Yutu-dutu rine simba, rakarova US kuchamhembe kweMariana Islands, zvichikonzera dzimwe njodzi nekukuvadza dzimba, kuparadza dzimba, kudzura matanda emagetsi uye kusiya mataundi ari matongo.
Murenje rakaparurwa nechikamu chegumi nedutu 18, kuchiri kuchinzvimbo chechikomo chakakonzeresa kukuvadza kwakanyanya kunyange kunzvimbo dzeSaban.Nguva mushure mekutsvaira kwechikamu chegumi nedutu 18, ichiri kushupika, zvichiita kuti chivakwa chikwanise kurarama muchikamu 18 chepamusoro. dutu. Doors uye Windows vanoita basa rakakosha.
Mazhinji emasuo nemahwindo hazvigone kubhadhara dutu rakakura kudaro. Nekudaro, maFOEN 's makuru ekudzivirira emahwindo nemahwindo anogona kutsigira pasi pekurwiswa nematutu gumi nemasere. Hapana kukuvara, hapana kupaza.
Iyo villa yese yakakomberedzwa nenzvimbo ye "mhepo yakasimba kusimba" uye "yakakwirira mvura kusimba". Kunyangwe paine dutu kunze kwewindo, hapana pengozo pakati peWindows nemasuo.
Muedzo wegiredhi 18 typhoon wakapupurira kuchengeteka kwemhando yeFOEN yakakwirira-kuguma kuchengetedza windows nemasuo.
FOEN aluminium masuo uye windows windows. Kuita ndiyo data yemoyo. Iyo ine yakakwirira mhepo kusimbisa, yakakwirira mvura kusimba, yakakwirira kuwedzera uye yakanakisa kupisa inodzivira, chando chiratidzo uye inonzwika inokurudzira kuita. Iyi giredhi yemhepo impermeability inosvika 6 iyo inogona kumisa kubhururuka kwemhepo uye kupinda kweguruva. Kuchengeta wakachena mukati. Kupisa kupisa ndeimwe yakakosha index, K factor ndeye 0.8, mashoma kushandisa simba, chengetedza imba yako temperure zvakanaka munyoro munguva yechando uye pane kutonhorera muzhizha. kumanikidzwa kwemhepo kudzvinyirira mukana zvakare inoratidzira yeiyo, chigadzirwa hachizo deformation kana kudonha kubva pakadzika kwe100meters. Yakakwira mwero yekudzivirira mvura, kuchekerera kwemvura hakuzoitwe pasi pegiredhi 12 typhoon. Yekupedzisira imwe Inzwi kusimbisa, Deredza 35 db.
Parizvino isu tatoita ongororo nekugadzira zvina mainini: Chikamu cheGerman Eiko, chakasarudzika dzimba dzakateedzana, dzakateedzana dzakateedzana uye neChinese classical Series.
FOEN yaive Yekutanga Kambani Akatanga Aluminium Window & Door System Institute MuChina. Dzimwe nguva, vatengi vedu vanofuratira ichi chikamu. Nepo ichi chikamu chakawanda kwazvo chekuriritira chiri muhurongwa hwedu hwese windows uye nemasuo timu. Kutanga zvinoreva nzira-inogara kwenguva refu inzira. Ndokusaka isu tichizvikudza pamusoro pavo .. Ndosaka tine Biggest Aluminium Window & Door System Research Team MuChina. Nguva inobhururuka, muna 2017, yechipiri aluminium gadziriro yekutanga Henan FOEN aluminium Fekitori yaive yakawanda, ingangoita panguva imwe chete, Foen anga atove ari pamusoro 5 aluminium vatengesi muChina uye akakunda China mazana mashanu anokosha maFekitori. Kusvika ikozvino, tichiri kuramba tichifamba. Kubudirira kwatakawana iri zvakare mutoro watinorovera. Isu tichagara takatarisana nekupa iyo yakanyanya kunaka basa kune mutengi wedu.